वडा अध्यक्षमा पराजय संगै वाख्रा पालन – Click Khabar
वडा अध्यक्षमा पराजय संगै वाख्रा पालन
२०७७, ३ कार्तिक सोमबार0
चितवनः केन्द्रमा राजनिती गर्नेहरु पूर्णकालिन हुने भए पनि स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताहरुको आफ्नो पेशा नहुँदा टिक्न कठिन हुन्छ । पारिवारीक व्यवस्थापन संगै राजनिती उनीहरुको बाध्ता हुने गर्दछ । विगतमा राजनिती मात्रै गर्दै गर्दा धेरैले आफ्नो सम्पत्ती सकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै माडीमा गएको स्थानिय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा पराजय भोग्नुभएका निलकण्ठ काफ्ले यतिवेला राजनिती संगै बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ ।
माडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का काफ्लेले सोही वडामा पराजय वेहोरे पछि व्यवसायीक वाख्रा पालनमा जुट्नु भएको हो । ५७ वर्षिय काफ्ले अहिले माडी एग्रोफार्म मार्फत वोयर बाख्रा पालेर पाठापाठी बिक्रि बितरण गर्दै आउनु भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका तर्फबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएका काफ्ले अहिले आफ्नै व्यवसायमा रमाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले गएको एक वर्षमा रु १० लाख भन्दा वढिको बोयरका पाठापाठी बिक्रि गरेको बताउनुभयो ।
भारतको तामिलनाडु पुगेर शुद्ध बोयरको पाठा ल्याएर उहाँले व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो । आफ्नो चाहना पुरा गर्नका लागि रु ५४ हजार रुपैयाँमा १७ किलोको तीन महिने पाठो ल्याएर हुर्काउन थाल्नुभयो । तर ६ महिनामै खोरभित्रका अन्य बाख्रा मर्न थाले । उहाँले गुनासो गर्नुभयो “५५ बाख्रामध्ये १५ वटामात्रै बाँचे ।” बाख्राका पाठा मर्न थालेपछि बाख्रापालननै छाड्ने स्थितिमा पुग्नुभएका काफ्लेले हार खानु भएन । बिरामी परेको बोयरको पाठो पछि तंग्रिन थाल्यो । विगत सुनउँदै भन्नुभयो, “अर्को वर्ष खोरमा ५० बाख्रा पुगे, बोयर क्रस गरेर पाठापाठी जन्मिन थाले ।” त्यही बोयर मार्फत उन्नत जातका पाठापाठी जन्मिन थालेको उहाँको भनाई छ । जसले खोर भरिन थाल्यो ।
उहाँले वि.सं.२०७५ सालमा रु १२ लाख बराबरका बोयरका पाठाहरु बेच्नुभयो । गत वर्ष करिब रु १० लाख बराबरको बेच्नुभयो । वि.सं. २०७६ को असारमा उहाँले अष्ट्रेलियाबाट २४ वटा बोयरका पाठी र ६ वटा पाठा किनेर ल्याउनुभयो । अहिले फर्ममा ६० वटा बाख्रा छन् । जसमध्ये ४० वटा माउ छन् । सुरुमा रु १ लाखको बाख्रा किनेर फार्म दर्ता गराउनुभएका काफ्लेले हालसम्म फार्ममा करिब रु १ करोड लगानी गरिसक्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“यो वर्ष २० लाखका बोयरका पाठापाठी बेच्ने लक्ष्य छ ।” उहाँले सुनाउनुभयो, “बोयर उन्नतजातको बाख्रा हो, यसले उत्पादन लिन सजिलो हुनेरहेछ ।”
छिटो हुर्कने, तौल बढ्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएकाले बोयर जातका बाख्राको माग बढ्दो छ । शुद्ध बोयर पाठा रु १ लाख ५० हजार देखि रु २ लाखसम्म बिक्रि हुन्छ भने पाठीहरु रु १ लाख ८० हजारसम्म बिक्रि हुने गर्छ । २ वर्षमा बोयरका बोका १ सय किलो बढी तौलका हुन्छन् । शुद्ध बोयर बोका र स्थानीय बाख्राबीच क्रस गराएर जन्मने पाठापाठी ४ महिनामा ४० किलो बढी तौलका हुन्छन् । अर्खाखाँची, स्याङजा, बुटवल, धनकुटा, पोखरासम्मबाट बोयरका पाठापाठी लिन आउने गरेको उहाँले वताउनुभयो । व्यवसायीक रुपमै अघि बढ्ने सोचका साथ उहाँले केही स्थानीयलाई लिएर धादिङ, गोरखा, तनहु, पोखरासम्म पुगेर उत्कृष्ट गाई, बाख्रा फार्म अवलोकन गर्नुभयो । उहाँका तीन छोरामध्ये जेठो छोरा मनोरोग विशेषज्ञ डा. खगेन्द्र र माइलो छोरा हरि इञ्जिनियर हुनुहुन्छ । कान्छो छोरा हिम भारतमा बिद्यावारिधि गर्दैहुनुहुन्छ ।
छोराहरु संगै नभए पनि श्रीमतीको प्रत्यक्ष साथ छ उहाँलाई । बाख्रा उत्पादनमा नश्ल सुधार अतिआवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । यस फार्मलाई नमुना स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । फार्ममा शुद्ध बोयर, बोयरका ५० प्रतिशत क्रस, ७५ प्रतिशत क्रस गरेका पाठापाठी उत्पादन हुदै आएको छ । फार्मबाट अहिले पाठापाठीमात्रै बेच्ने गरिन्छ । बाख्रा पालनका लागि चार विगाहा जमिनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये २ विगाहामा अहिले घाँसखेती छ । बाख्रापालनबाट भविष्य राम्रो भएको भन्दै उहाँले सीप र लगानी गरेर निरन्तरता दिएमा व्यवसायमा सफल बन्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “मिहिनेत ग¥यो भने विदेश जानु पर्दैन । स्थानीय स्तरमा राजनिती पनि छोडनु पर्दैन ।”
चितवनमा नवलपरासीको सङ्क्रमितको मृत्यु
देशभर थथिए ३ हजार ७९० कोरोना संक्रमित
Banner Newsक्लिक खबर विशेषमुल खबरसमाजसुरक्षा अपराध
२ सय ८३ जनालाई माछामार्ने अनुमति पत्र र पोशाक बितरण
२०७७, १८ श्रावण आईतवार0
पहिला पुरीयो पानी जमे पछि आबश्यकता प¥यो
२०७७, ९ आश्विन शुक्रबार0
क्यान्सर अस्पतालमा आउने बिरामीहरुको कोरोना परीक्षण गर्न थालियो ।
२०७७, ९ जेष्ठ शुक्रबार0
भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा दुई जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु
क्लिक खबर विशेषप्रदेशमुल खबरसमाजसुरक्षा अपराध
माडीमा शशस्त्रको बिओपी स्थापना
Banner Newsक्लिक खबर विशेषप्रदेशमुल खबरसमाजसुरक्षा अपराध
निकुञ्जमा पाँच महिनाको गैंडाको बच्चा मृत फेला
त्रिशुली दुर्घटना अपडेट : बेपत्ता तीन मध्य २ जनाको शव फेला
भरतपुर अस्पतालमा हेटौंडाकी कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बिरामी बोकेको पिकअप त्रिशुलीमा खस्दा ३ जना वेपत्ता
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्नाले जन्मायो बच्चा